शब्दकोश: लालटिन, जून र जूनकिरीहरू
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, February 12, 2009
सिकारु February 12, 2009
प्रणय दिवस पारेर दर्शाइएको प्रेम प्रसंग संगै गासीएको मिठो शेर सहितको लेख औधिमन पर्यो मलाई त धाइवाजी ।
अनि लालटिनको बन्द शिशाको प्रकासबाट जुनकीरी झै स्वछन्द हावामा फैलीदा फैलीदै अस्वीकार्य हुन पुगेको त्यो प्रेमप्रसंगले यो बर्षको प्रणय दीवस संगै नयाँ आकाङक्षा र नयाँ उत्साहको अभिरुचि पैदा गराइ प्रभातको किरण हुदै पुनर्मिलनको जुनको प्रकासले तपाईहरु बिच पुन साइनो गासियोस भन्ने चाहन्छु ।
Dilip Acharya February 13, 2009
"लालटिन, जून र जूनकिरीहरू" भन्ने शीर्षक सार्थक भए पनि नभए पनि लोडसेडिङको मार प्रेममा पनि पर्दो रहेछ भन्ने चाहि सत्य तथ्य नै रहेछ जस्तो लाल्यो ।
बाकी अन्तिममा राखिएको गजल भने एकदमै राम्रो लाग्यो ।
अनी, के हो यो धाईबा जी, हिजो देखी प्रत्येक पल्ट तपाईको ब्लगमा छिर्दा भीन्दा भिन्दै सजावट देख्दै छु।
एकचोटि त झुक्कीए पनि म। कोहि अपरीचितको घरमा पुगेको जस्तो पनि भयो र फुत्त निस्कें ।
मलाई चाहि अहिलेको भन्दा यो भन्दा पहिलेको (पुरानो पनि होईन, बीचको) टेम्पलेट राम्रो लागेको थियो ।
धाईबाजीको गजल एकदम मनपर्यो...
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) February 13, 2009
"भेटदा मात्र प्रिय तारा-जूनका कुरा
साँझ-बिहान उही चामल-नुनका कुरा"
ओ हो ! कस्तो सरल र मीठास ....... लेखाई प्रसंसा योग्य रहेछ ।
अनि धाइवा जी को यो बद्लिदो ढाचा उतम लाग्यो ।
एकल यात्री February 13, 2009
मुक्तिको गीत गाउने बेला हो यो
प्रेमको गीत म गाउन सक्दिनँ
देश रोएको बेला
Valentine Day मनाउन सक्दिनँ ।
समृद्धि सायदजीको यस लेखौट पहिले यतै पढें , अनि खसखसमा पढें र फेरी पनि यता पढें - तेहेर्याएर । कस्तो पत्याउनै नसकिने जस्तो सम्भावनाको ढोका ढक्ढक्याउन सम्म नसक्ने प्रेम हाम्रो पुस्तामा पनि है ? त्यसो त एउटै अवस्थामा पनि फरक प्रकृति अनुशार ब्याक्ति पिच्छे फरक असर देखिने प्रेमको मामला न हो यसै हुनुपर्थ्यो या हुनुपर्ने हो भनेर कहाँ हुन्छ र ? अनि चामल नुनका कुरा त समृद्धि सायदजी कै हो नि हैन र ? हामी पाठकहरु झुक्किएर धाईबाजीको भन्दैछौं कि , झुक्किएर सायदजीको भन्दैछौ ? अलमल पार्ला जस्तो भयो ।
एकल यात्रीजी , मुक्तिको गीत गाउँदा मुटुमा प्रेम रित्याउनै पर्छ भन्ने त नहोला कि ? प्रेमलाई त्यती तल राख्नुपनि भएन भन्छु म त , यो त जुनसुकै अवस्थामा पनि अर्थोक नमासी मुटुमा राख्न सकिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने प्रेम बहिस्कार गरेर प्राप्त मुक्तिमा पनि सुख पट्टक्कै हुँदैन ।
दिलीपजीले भनेझैं , ब्लगको सिँगार पेटारमा धाईबाजी कस्सिएरै लाग्नुभए जस्तो छ - " सौंदर्य जहाँ जे छ त्यही परम छ । चित्त नबुझाउने हो भने अझ बड्ता सौंदर्य भेट्न नसकिने होइन तर के त्यो सौंदर्यको उच्चतम तथा अन्तिम अवस्था होला ? " म यस्तै लेख्दैछु यतिखेर तपाईंको ब्लग सिँगार्ने कुरामा प्याच्च लेख्न मन लाग्यो अन्यथा लिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई त ।
सबै टिप्पणीकार साथीहरूलाई सादर धन्यवाद !
ढिलाइको लागि के माफी मागूँ, थेगो हुन बेर छैन माफी पनि ।
अवश्य पनि यो पूरै लेखोट समृद्धिजीकै हो । पत्र र गजल दुवै ।
प्रेमको बारे मतभेद चलिहाल्यो, यति भन्छु- माया मनको कुरा हो । दीपकजीले भनेजस्तै यदि मनमै माया छैन भने उसले न कुनै व्यक्तिलाई न त देशलाई नै माया गर्न सक्छ । त्यति साँगुरो धरातलमा रहँदैन होला प्रेम ।
मैले मेरो ब्लगिङको सुरुवातताकादेखि नै साथीसँगीको कुराकन्थालाई पनि जोरजाम गर्दै पस्किँदै आएको छु । पछिल्लो समयमा 'अतिथि आसन'लेबलअन्तर्गत त्यस्ता सामग्री प्रकाशन भइरहेका छन् । जो साथी राम्रो लेख्‍नुहुन्छ र विभिन्न असुविधाले आफैँ ब्लगिङ सुरू गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि यस्तो ठाउँ छुट्याउनु आवश्यकै पर्छ कि भन्ने लागेर त्यसो गरेको हुँ ।
समृद्धिजी मेरो सर्कलमा रहेका प्राय: सबै ब्लगरको घरमा छिर्नुहुन्छ र पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउने ताउरमाउर देखाउनुहुन्न । मेरो ब्लगिङबारे पनि उहाँ मौखिक झटारो दिइरहनुहुन्छ । यसै कारण आज उहाँको लेखोटबारे उहाँको साटो मैले नै खुलस्त्याइँ दिँदै छु ।
दिलीप दाइ, मैले त यसो कोड खेलाउन सिकेको केके भयो केके । तपाईँले ब्लगोमेनियामा लेखेजस्तै भयो । तपाईँले मन पराउनुभएको टेम्प्लेटमा गजेट थप्न सारै समस्या देखापर्‍यो र मन नलागीनलागी डेरा फेर्नुपरेको हो ।
अनि दीपकजी, यति इमानदार र खुलस्त आलोचनालाई अन्यथा लिने कुरै छैन । यसलै त बरू माझिन सघाउँछ, होइन र ?
सौन्दर्यको अन्तिम सीमा हुँदैन, सत्य हो । चित्त त स्वर्गै चुमे पनि नबुझ्दो हो हामी मानवलाई । र पनि सौन्दर्य फक्राउने विकल्पका ढोका त केही हदसम्म खुलै हुँदैनन् र ? मैले त्यति मात्र गरेको हुँ । मुख्य कुरा आवरणको होइन,कति गुदी दिन सकिन्छ भन्ने हो । त्यसो त जस्तै रूखो र सङ्कटग्रस्त जीवन पाए पनि मान्छेले बाँच्न त छाड्दैन । अज्ञानी हात चल्दा रिमिझिमी देखिएको मात्र हो ।
रुपेश February 20, 2009
पत्र साहित्यको प्रशंसक भएको नाताले कैले काही कनिकुथी लेखेको अनुभव
पत्र राम्रो लाग्यो । शिर्षकले नै के जनायो भने प्रेम उज्यालोको विम्ब हो । चाहे त्यो जुन होस् , जुनाकिरी होस् या लालटिन नै किन नहोस् , आखिर उज्यालो त दिन्छ नै । जुनको उज्यालो घाम बन्नुपर्नेमा झाडी पस्दा प्रेमीहरुको नाडी बन्द हुने अवस्था हुनुपर्ने कुरा अनौठो पनि हैन । शेरहरुले पत्रको पुरै भाव ४ वाक्यमा समेटेको मिठो लाग्यो ।